About eTurboNews - eTurboNews | Isbeddellada | Wararka Safarka
Bogga ugu weyn » About eTurboNews
Hawlgalka of eTurboNews Kooxda ayaa ah inay bixiso adeeg hufan oo B2B ah oo warar ah, matalaadda PR ee safarka caalamiga ah iyo warshadaha dalxiiska iyo ku baahinta macluumaadka iyada oo loo marayo emaylka iyo keydinta bogga internetka, tas-hiilaadka raadinta iyo raadinta akhristayaasha.
eTurboNews, adeegeena wararka flagship, waa warbixin maalinle ah oo warbixinno ah oo ay qoreen koox caalami ah oo kaqeybgalaya tifaftirayaasha, qorayaasha, falanqeeyayaasha martida iyo weriyeyaasha mararka qaarkood, oo diirada saaraya dhacdooyinka, wararka shirkadaha, isbedelada suuqyada, jidadka cusub iyo adeegyada, horumarka siyaasadeed iyo sharci dejinta. khuseeya safarka, gaadiidka iyo dalxiiska, iyo arrimaha la xiriira doorka dalxiiska ee la dagaalanka saboolnimada, iyo mas'uuliyadda warshadaha ee deegaanka iyo xuquuqda aadanaha.
Waxyaabaha ay ka kooban yihiin warbixinnada ayaa si habeysan loo nidaamiyaa iyadoo la raacayo qiyamka wararka, muhiimadda iyo saxsanaanta, xuquuqda daabacaadda oo la ilaaliyo, kana madax bannaan wax xayeysiin iyo kafaala qaadis ah.
Saldhigga aqriska waa liis garaynta iimaylka liistada emailka ee hadda ka shaqeeya 255,000 + adduunka oo dhan, inta badan xirfadlayaasha ganacsiga safarka iyo saxafiyiinta takhasuska u leh safarka iyo dalxiiska.
eTurboNews maqaallada tifaftirka ayaa loo heli karaa isku-darka iyo dib-u-daabicista warbaahinta kale ee wararka marka la eego shuruudaha caadiga ah.
eTurboNews Breaking News waa calamada astaanta u ah isgaarsiinta degdega ah ee shaqsi ama dhaqaaqa alaabada wararka degdega ah ee loo qeybiyo sida iyo markii loo baahdo.
eTurboNews Dooddu waa guddi fariin bulsheed oo ku saleysan websaydh ku saabsan jawaab celinta, faallooyinka iyo falcelinta akhristayaasha.
Shabakadda TravelMarketing waa la talinta xiriirka dadweynaha oo si gaar ah loogu talagalay baahiyaha warshadaha safarka iyo dalxiiska. Waxaan bixinaa adeeg ah xalal PR-ga ah oo la dajiyay iyo talo ku saabsan suuqgeynta iyo calaamadeynta shirkadaha waaweyn ama shirkadaha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah ee ku hawlan safarka, gaadiidka ama ganacsiga la xiriira dalxiiska.
eTurboNews waa ganacsi ganacsi iyo ganacsi adeeg macaamiil oo ah qaybinta khadka tooska ah ee wararka iyo macluumaadka la xiriira ganacsiga safarka adduunka, oo ay weheliso khabiir ku takhasusay safarka ganacsiga iyo adeegga suuq geynta iyo iskaashi lala yeesho hay'adaha adduunka ee la xiriira safarka iyo dalxiiska, oo ay ku jiraan UNWTO, WTTC iyo ICTP iyo iskaashi xagga warbaahinta ah oo lala yeesho carwooyinka safarka oo ay ka mid yihiin WTM London iyo IMEX-Frankfurt.
Qaabka hawlgalku waa in loo qaybiyo warbixinnada wararka iyo farriimaha ganacsiga e-mayl liiska liiska ganacsiga ka-doorbididda safarka iyo macaamiisha warbaahinta, iyo in la keydiyo farriimaha dib-u-soo-celinta iyo tixraaca websaydhka, iyo in la siiyo xalal loo habeeyay PR iyo suuqgeynta shirkadaha yar yar iyo kuwa dhexe ee dalxiiska iyo dalxiiska.
eTurboNews waxay kasbataa dakhligeeda lacagaha laga bixiyo qaybinta, xayeysiinta banner, xayeysiinta iyo waliba taageerada kafaala qaadida oo noqon karta mid kujirta qiime lacageed ama qaab isku mid ah (baayacmushtar). eTurboNews sidoo kale waxay kasbataa dakhli abuurista takhasus gaar ah PR iyo xalal suuq geyn iyada oo loo marayo Isgaarsiinta eTurbo qaybta.
Marka la eego qaybinta macluumaadka ganacsiga safarka, eTurboNews waxay siinaysaa qiimo dheeri ah gaadhitaankeeda caalamiga ah ee degdega ah, bartilmaameedka xirfadlayaasha ganacsiga safarka iyo warbaahinta (saxafiyiinta iyo joornaalada, joornaalada, wariyeyaasha iyo adeegyada khadka tooska ah), kuna jira liiska qaybinta emaylka oo ay tiradoodu kor u dhaaftay rubuc malyan ka mid ah macaamiisha xulashada adduunka oo dhan.
eTurboNews sidoo kale waxay ku dareysaa qiime qeybinta wararka ganacsiga safarka iyadoo loogu yeerayo shabakada wakiilada gudaha, wariyeyaasha iyo falanqeeyayaasha si ay u bixiyaan warbixinno diirad saar ah oo la xiriira ganacsiga safarka laga soo bilaabo dhacdooyinka ku dhow dhow warbaahinta guud.
eTurboNews sidoo kale waxay ku dareysaa qiimo iyadoo martigalinaysa gole wada hadal iyo websaydh la xiriira socdaalka iyo dalxiiska kaas oo bixiya isdhexgal, macluumaad, iyo jawaab celin laga helo akhristayaasha.
E-news daabacaadda ugu da'da weyn adduunka ee adduunka. Waxaa la aasaasay 1999, maalin kasta daabacado emayl ilaa 2001.
Akhriska: 230,000 oo ah xirfadlayaal ku xeel dheer arrimaha safarka, 17,000 oo saxafiyiin ah, 2.03 milyan macaamiil celcelis ahaan ah
Juqraafi ahaan gaar ahaan: 30% Waqooyiga Ameerika, 30% Yurub, xoog ku leh Afrika, Gobolka Khaliijka & Bariga Dhexe, Bartamaha, Bariga iyo Koonfurta Aasiya, Australia iyo Baasifigga. Ku xaddidan Koonfurta Ameerika, Shiinaha.
TravelWireNews: Runtii nuxurka caalamiga ah ee taabanaya safarka, dalxiiska iyo xuquuqda aadanaha. 200 + maqaal maalintii.
eTurboNews: Xirfadleyda Warshadaha Safarka adduunka oo dhan oo ay ku jiraan iibinta ganacsiga, MICE, PR, duulista, soo dhoweynta, ururada, dowladaha, iyo warbaahinta. 1-3 ayaa ka kooban maqaallo, 10-25 maqaallo maqaal ah maalintii.
eTN.safarka: Xirfadlayaasha Warshadaha Safarka ee adduunka oo dhan: Akhristayaasha badankood waxay ka helaan etn.travel xiriir iyo iskaashi.
WorldTourismWire: Hogaamiyaasha sarsare ee UNWTO, WTTC, ETOA, ICTP, PATA, IIPT, IGLTA iyo ururo kale. Maamulaha guud ee shirkadaha waaweyn iyo madaxda gudiyada dalxiiska iyo CVB. 1-3 maqaal asbuucii.
www.kulanka.travel: Akhristayaasha bartilmaameedka ayaa ah kuwa wax iibsada iyo kuwa wax ku iibiya Shirka iyo Warshadaha Dhiirrigelinta Socdaalka.
www.aviation.travel: Wararka ku saabsan diyaaradaha, garoomada diyaaradaha, iyo abaabulka adduunka duulista oo ay ku jiraan cusbooneysiinta dadka maamula warshadan.
HawaiiTourismAssociation.com: Blog dalxiis ku saabsan Hawaii.
hawaiinews.online Wararka ku saabsan Hawaii ee martida iyo dadka deegaanka ah
Socdaalka Warshadaha: Wakiilada safarka ee xiiseynaya inay wax ka bartaan qalabka iibka iyo dalabyada gaarka ah. 10-20 waxay bixisaa usbuucii.
safarka Bog loogu talagalay khamriga, gourmet, raaxada iyo safarka
Wadada Gaytourism.travel: Ganacsiga iyo socotada xiiseynaya safarka LGBT iyo dalxiiska.
Forimmediaterelease.net: Saxafiyiinta xiisaynaya wararka socdaalka iyo dalxiiska. 5-10 sii deynta dhajinta maalintii.
eTurboNews.de: Xirfadlayaasha safarka ee luqada Jarmalka 2-5 maqaal maalintii.
Dhacdooyinka Dunida: Liisaska dhacdooyinka iyo dallacsiinta.
Isbahaysiga Caalamiga ah ee Wada-hawlgalayaasha Dalxiiska (ICTP)
Daabacadaha (joornaalada elektarooniga ah)
Warsidaha TravelWireNews TravelWireNews: Cusbooneysiinta 3dii saacadoodba mar waxay gaarayaan 72,000 + macaamiisha
ETN Breaking News News Saacadaha saacadaha (ama markii wararka jaban ay ka dhacaan warshadaha socdaalka & dalxiiska: macaamiisha 45,200)
Maalin kasta eTN: Wargeys maalinle ah loogu talagalay warshadaha socdaalka & Dalxiiska Warshadaha: 151,200 macaamiil
eTN Toddobaadle: Wargeyska toddobaadlaha ah loogu talagalay Warshadaha Safarka & Dalxiiska: 12,100 macmiil
WorldTourismWire: Warsidaha Hogaamiyaasha Dalxiiska, Wasiirada Dalxiiska iyo madaxda ururada, iyo agaasimaha guud ee shirkadaha waaweyn: 7,100 macmiil
ForImmediaterelease: Cusbooneysiin maalinle ah oo loogu talagalay saxafiyiinta daneeya wararka safarka & dalxiiska: 17,000 oo macaamiil ah
Kulamada. Safarka: Cusbooneysi toddobaadle ah ama in ka badan oo loogu talagalay iibsadayaasha iyo iibiyaasha warshadaha MICE, 12,100 akhristayaal.
Duulimaadka: Cusbooneysi toddobaadle ah ama in kabadan oo ku saabsan garoomada diyaaradaha, diyaaradaha, iyo arrimaha la xiriira duullimaadyada adduunka.
Gaytourism: Warar cusub loogu talagalay socotada LGBT iyo Warshadaha safarka: 6,800 akhristayaal
Wines.raac joornaalka toddobaadlaha ahr ilaa 1100+ akhristayaal Cusboonaysiinta ku saabsan Khamriga, Gourmetka iyo arrimaha safarka & Dalxiiska: 1,100 akhristayaal
Hawainews.online: Uupdates on Hawaii iyo Hawaii Dalxiis: 5,600 akhristayaal
Travelindustrydeals laba jeer usbuucii cusbooneysiinta 68,000 + wakiilada safarka adduunkawird (farriimaha iibka)
eTurboNews Daabacaadda luqadda Jarmalka: Laba jeer usbuucii oo gaareyso 8,001 macaamiil
Baraha Bulshada iyo Bandhigga Barta Wararka:
Ka mid noqoshada wararka Google: eTurboNews - Siideyn degdeg ah
Hindustan Times, Ganacsiga-Safarka, Cusbooneysiinta MICE, Hawl wadeenada Duulista, TravelTalkMedia iyo kuwa kaloo badan
Facebook: eTurboNews - safarka - TravelWireNews - adduunyada - ICTP - gayturismusa - hawaiinews
Shabakadaha lammaanaha oo ay ku jiraan EIN, CNN Task Group, Duulista Hawada, Hindustan Times iyo kuwo kale.
TWITTER: eTurboNews - CNN_Newstrend - WorldTourismHadda - HawaiiTalk - Dalxiisyada - SafarkaAndWines - eTurboNews af Jarmal - GAYTURISM
Sidee loo dhajiyaa sii deyntaada?
(fursadaha lacag bixinta iyo bilaashka ah)
Halkan guji si aad u sii wado